सी जिनपिङ चिनियाँ सत्तामा थप शक्तिशाली, सेनाको पूर्ण साथ रहने « Lokpath
सी जिनपिङ चिनियाँ सत्तामा थप शक्तिशाली, सेनाको पूर्ण साथ रहने
बेइजिङ, २१ कात्तिक । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सत्तामा थप मजबुत बनेका छन् । राष्ट्रपति सीमाथि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले पूर्ण निष्ठाका साथ सहयोग गर्ने संकल्प गरेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको गत अक्टोबरमा भएको महाधिवेशनले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिमा चयन गर्दै थप शक्तिशाली बनाएको थियो ।
उनको विचारलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सी विचारधारा’ को रुपमा ग्रहण गर्दै पार्टीको विधानमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओ त्से तुङ र देङ सियाओ पिङजत्तिकै उनलाई शक्तिशाली स्थान दिइएको हो ।
राष्ट्रपतिसँगै उनी चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको प्रमुखको रुपमा समेत रहेका छन् । चीनको सर्वोच्च सैन्य प्राधिकारले भनेको छ, ‘चीनको सेना पूर्ण रुपमा बफादार तथा भरोसायोग्य रहने छ र केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) का अध्यक्ष सी चिनपिङको आदेशको पूर्ण रुपमा पालना गर्नेछ ।’
आठ सदस्यीय सीएमसीको २३ लाख सदस्य रहेको चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको उच्च कमाण्ड हो । ६३ वर्षीय सी सीएमसीको एकमात्र असैन्य सदस्य हुन् । पाँच वर्षमा एक पटक हुने सीपीसीको महाधिवेशन गत २४ अक्टोबरमा भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: २०७४,कार्तिक,२१,मंगलवार ०९:०९
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको संघीय राजधानी सिड्नीमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले त्यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि शुक्रवार
खोप अपडेट : विश्वभर तीन अर्ब ७५ करोड २६ लाख ७५ हजार ४१६ डोज खोप लगाइयो
विश्वभर तीन अर्ब ७५ करोड २६ लाख ७५ हजार ४१९ डोज कोरोनाविरुद्ध खोप लगाइएको छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका दश
कोरोना अपडेट: भारतमा थप ३५ हजार संक्रमित, कुल ४२ करोडले लगाए खोप
भारत । भारतमा कोरोनाभाइरसबाट थप ३५ हजार ३४२ जना कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका छन् ।त्यसैगरी पछिल्लो एक दिनमा अरु ३८ हजार
राज र शिल्पालाई अर्को झट्का: सुन घोटालामा अदालतले सुनायो जरिबाना
भारत । राज कुन्द्रा र अभिनेत्री शिल्पा सेट्टिलाई अर्को झट्का लागेको छ । शिल्पा र राजको सुन कम्पनी (गोल्ड कम्पनी)
डा. भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति विश्व हिन्दु महासंघको आपत्ति
महामहिम ओलीदेखि व्यवस्थासम्मलाई दोष !
‘नो अब्जेक्सन लेटर’ कीर्ते गरेर युक्रेन उड्न लागेका राजवंशी पक्राउ
आफ्नै साथीको हत्या गर्ने सैनिक जवान पक्राउ
अध्यादेश टुंगो नलागेसम्म मन्त्रालयको कामले गति लिन सक्दैन : अर्थमन्त्री…
पाँच दलको गठबन्धनले संविधान र संसद जोगायो : चित्रबहादुर केसी